Istuudiyo naqshadeynta Isbaanishka oo aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 05/04/2022 20:00 | Design Graphic
Sida aan ku soo sheegnay mid kale oo maqaaladeena ah oo aan kaga hadalnay naqshadeeyayaasha Isbaanishka. Waddankeenu wuxuu leeyahay noocyo badan oo naqshadeeyayaasha garaafyada ah iyo kuwa aad u wanaagsan, waa in la aqoonsadaa.
Nashqadeeyayaasha Isbaanishka oo leh taariikh
Maanta, waxaanu diirada saari doonaa goobaha shaqada halkaas oo ay ku dhasheen qaabab kala duwan, mashruucyo iyo xirfado kala duwan. Waxaan dooneynaa inaan ka hadalno istuudiyaha naqshadeynta Isbaanishka. Goobahani waa kuwa leh ballanqaadyo waaweyn oo naqshadeynta garaafyada ah ee waddankeena hoostooda.
Hubaal naqshadeeyayaasha ahaan, markaad dhammayso waxbarashadaada, waxaad is waydiisay istuudiyaha naqshadaynta ee aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso. Waxaa suurtogal ah inaad waalan doonto raadinta, iyo akhrinta macluumaadka ku saabsan mid kasta oo iyaga ka mid ah. Maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waxaanan kaa dhigi doonaa inaad ku waasho inaad ka mid noqoto.
1 Istuudiyaha naqshadeynta sawirada ee Spain
1.1 Coco ee studio
1.2 Flou Flou
1.3 sorry Studio
1.4 Rubio iyo Del Amo
1.5 Haye istuudiyaha
1.6 Etxeberria geed orange
1.7 Sublima Studio
Istuudiyaha naqshadeynta sawirada ee Spain
Waan waalannay, iyo Waxaan ku dhiiranay in aan magacawno 9 ka mid ah istuudiyaha naqshadeynta garaafyada ee ugu wanaagsan dalkeena. Si aan doorashadan u samayno, ma aannaan kala saarin inta ugu badan ilaa ugu yaraan sababtoo ah waxay ahayd hawl aan macquul ahayn.
Doorashada daraasaddan ma fududayn haba yaraatee, waxaanan fahamsanahay in aan hal ka badan seegay, laakiin haddii kale waxay noqon doontaa liis aan dhammaad lahayn.
Coco ee studio
Este multimedia studio, wuxuu ku takhasusay naqshadeynta bogagga shabakadda. Waxay ka kooban tahay xirfadlayaal khibrad dheer u leh oo ku takhasusay adduunkan, waxay leeyihiin naqshadeeyayaasha shabakada, barnaamijyada, naqshadeeyayaasha iyo xirfadlayaasha suuqgeynta dhijitaalka ah.
Coco ee studio Waxay mas'uul ka tahay laga soo bilaabo marxaladda naqshadeynta iyo horumarinta website-ka, abuurista iyo hirgelinta xeeladaha suuq-geynta ee kala duwan. kaas oo siinaya muuqaalka ugu sarreeya ee noocyada ay la shaqeeyaan.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa a barashada isgaarsiinta garaafyada iyo cilmi baarista. Waxay diiradda saaraysaa daryeelka deegaanka iyo u heellanaanta qalabka naqshadaynta. Waxaa ka mid ah shuqulladiisa waxaan ka heli karnaa mashaariicda aqoonsiga sumadda, buugaag, naqshadeynta shabakada, boodhadhka, iyo wax ka badan.
Istuudiyaha naqshadeynta ayaa ka soo baxay Valencia 2007, isagoo ka yimid gacmaha naqshadeeyayaasha, Alberto Flores iyo Mireia Juan. Shaqadiisu waxay diiradda saartaa aragtida naqshadeynta ee dhinacyo badan.
Magaalada Barcelona waxaad ka heli kartaa istuudiyaha naqshadeynta, kaas oo waxa warshaduhu ay la socdaan hababka farsamada.
Daraasad ka kooban tiro yar oo xirfadlayaal ah, taas oo horumarinta mashaariicda naqshadaynta shirkadaha, bandhiga iyo soo celinta. Waxay bilaabatay 2005, oo uu hogaaminayay Borja Martínez, oo markii hore aasaasay kaligiis.
Habka aan la garan karin ee istuudiyaha ayaa ah shaqada qiyaas ahaan jireed iyo maadi xal garaafyada, taas oo keentay in wixii aan bilowgii ka wada hadalnay, garaafyada iyo warshadaha ay la nool yihiin farsamada gacanta.
Rubio iyo Del Amo
Waa studio design ah, kaas oo abuurista iyo maareynta summada ayaa laga shaqeeyaa, iyo sidoo kale baakadaha iyo naqshadaynta tifaftirka. Labada qof ee ka dambeeya istuudiyahan waa Guillermo Rubio iyo Julián Gárnes, kuwaas oo 2014 isugu yimid si ay u sameeyaan istuudiyaha ka dib 10 sano oo ay iskood u shaqaynayeen.
Tan iyo markii la aasaasay, ayaa ururinaysay tiro badan oo abaal-marinno ah oo lagu abaalmariyey shaqooyin kala duwan sida D&DA Abaalmarinta Graphite ee 2020, Silver Laus Nakhshad daabacaadyo xilliyeedka 2019, Silver Laus Naqshadeynta Aqoonsiga Shirkad Weyn ee 2018, Baakadaha Dahabka Laus ee 2016, iyo kuwo kale oo badan.
Istuudiyaha xaruntiisu tahay Barcelona oo shaqaynayay ilaa 2007. Mashruucyada kala duwan ee abuurista summadaha, naqshadaynta garaafyada, sawirada iyo wax kasta oo ku yimaada jidkooda ayaa la fuliyaa.
Waxay yiraahdeen in mid ka mid ah siraha ay tahay in loo tixgeliyo mid ka mid ah studios naqshadeynta ugu fiican waa xamaasad iyo fiiro gaar ah u leh si faahfaahsan in ay geliyeen mid kasta oo ka mid ah mashaariicdooda.
Etxeberria geed orange
Laga soo bilaabo Madrid wuxuu ku yimaadaa istuudiyahan isbeddel joogto ah. Waxaa ku jira, laba maskaxood oo awood leh oo hal abuur leh, kuwaas oo ah aasaasayaashiisa, Diego iyo Miguel, kuwaas oo la mid ah xarrago iyo farxad shaqadooda.
Waa studio leh a koox joogto ah oo hal abuur leh laakiin dabacsanaan, markay raadinayaan jawaabaha baahiyaha ka soo baxa mashruuc kasta. Mararka qaarkood waxay la shaqeeyaan xirfadlayaal kala duwan oo karti leh kuwaas oo loo doortay naxariis iyo qadarin. Tani waxay dhalinaysaa farshaxan fara badan, kaas oo la waafajin karo dhammaan noocyada mashaariicda.
Naranjo Etxeberria ayaa ahayd abaal-marinno aan lasoo koobi karin ayuu ku abaal-mariyey intii uu ku jiray xirfaddiisa, sidii tii u dambaysay ee ay heleen, Abaalmarinta Laus ADG. Isku-dhafka Silver (typography) ee 2021.
Istuudiyaha naqshadeynta garaafyada ee ku saleysan Murcia. Waxay ku takhasuseen naqshadaynta aqoonsiga summadaha iyo ololayaasha isgaarsiinta xayeysiiska. Waxay isku qeexaan inay yihiin xal doon.
Daraasaddan, nashqadayntu maaha kaliya arrin bilicsan, laakiin way sii socdaan. Laga soo bilaabo 2002, Waxay ku shaqeeyaan fikrado iyo fikrado sida tiirarka aasaasiga ah si aad u abuurto naqshadahaaga iyo xidhiidhkaaga.
Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa a barashada naqshadaynta iyo horumarinta mashaariicda online iyo offline labadaba. Tan iyo markii la aasaasay 2001, waxay ka shaqeeyeen mashaariic aad u kala duwan. Waxay yaqaaneen sida wax loo barto oo loo horumariyo, caqabad kasta oo iyaga loo soo bandhigo.
Mid kasta oo ka mid ah mashruucyadooda, waxay u raadiyeen xalalka baahiyaha qaabaynta iyo farsamada. Xalalkani waxay ahaayeen kuwo macquul ah, faa'iido leh oo cad. Waxay isu sheegaan inay yihiin naqshadeeyayaasha kala badh iyo injineerada badh., maadaama ay buug kuu naqshadeeyeen si la mid ah app-ka.
Haddii aadan aqoon isaga, waxaan kugula talineynaa inaad booqato boggiisa internetka oo aad ogaato mashruucyada calaamadaynta. Daraasaddan wax badan ayaa lagu soo ururiyay, karti badan, karti badan, shaqo badan, guul badan, wax kasta oo badan.
Iyada oo xarunteedu tahay Barcelona, ​​laakiin saldhigyadu waxay ku faafeen dhulal kala duwan sida Paris, England, New York iyo San Francisco. Waad ku mahadsan tahay ballaarintan, MUCHO, waxay noqotaa daraasad ay naqshadayntu isku dhafan tahay dhaqamo iyo aragtiyo kala duwan.
Sida aan uga faalloonnay bilawga daabacaadan, waanu gaabin doonnaa hubaal, waxaanan ku heesi doonnaa hal-abuurka. Haddii aad rabto inaad ogaato daraasado badan ama hay'ado xirfad ku leh waddankeena, Waxaan kugula talineynaa inaad booqato hagaha El Publicista, halkaas oo aad ka heli karto liis ballaaran oo ah qaybta hal-abuurka, halkaas oo ay ku tusi doonaan istuudiyaha naqshadeynta qaranka ee kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Istuudiyo naqshadeynta Isbaanishka oo aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso